हामी जितेर रोल्पा जिल्लामा जनसत्ता चलाउँछौ– पूर्ण केसी | Latest news of Nepal,world news, articles, literature, Business news, Entertainment and more
असार ६ गते, २०७४ - १५:३८
उम्मेदवारी दर्ता पनि भइसक्यो, कस्तो छ रोल्पामा चुनावी माहौल ?
चुनावी उत्साह राम्रो छ । गाउँगाउँमा बेग्लै उत्सव छाएको छ । लामो समयपछि राजनीतिकरुपमा सक्रियता देखिएको छ । हामी पनि उत्साहित छौं । यो जनयुद्धकालिन आधार हो हाम्रो । त्यसैले हाम्रो जनधार बलियो छ । हिजोका दिनमा पनि हामी हरेक पल जनतासँगै हुन्थ्यौं, आज फेरी उनीहरुमाझ पुगेका छौं । परिस्थिति फरक भएपनि जनताले हामीलाई नै विश्वास गर्छन् । त्यसैल जनताको यस्तो उर्लंदो जनलहर देख्दा माओवादी केन्द्रको विजय निश्चित देखिन्छ ।
प्रतिपक्षको अवस्था कस्तो छ ?
रोल्पामा प्रतिपक्षीका रुपमा नेपाली कांग्रेसको सामान्य उपस्थिति देखिन्छ । एमाले र अन्य दलको कुनै भूमिका र प्रभाव देखिन्न । नेपाली कांग्रेसको उपस्थिति देखिएपनि जिति नै हाल्छ भन्ने छैन । त्यसैले हामी नै हो मुख्य दल ।
पार्टी नेताहरुसँग सम्बन्ध भएका कारण करेन्टले उम्मेदवारी पाएको भन्ने चर्चा चलेको देखिन्छ, उम्मेदवारीमा विवाद भएकै हो ?
यो अनावश्यकरुपमा सिर्जना गरिएको चर्चा हो । रोल्पा जिल्ला हाम्रो बलियो गढ हो । त्यसैले यहाँ हरके कमरेडहरु उत्तिकै सक्रिय र सक्षम छन् । यो मध्ये कसलाई उम्मेदवार बनाउने भन्ने विषय पार्टीले टुंगो लगाउने विषय हो । कांग्रेस एमालेलगायतका केही विपक्षीहरुले केही एजेण्डा नपाएर यो हल्ला चलाएका हुन् । उम्मेदवारी दिनका लागि छलफल गरी यो कदम चालिएको हो । क. ध्रुव र क. ऋषिराम रोकाको रोहवरमा मलाई नै मेयरका लागि चयन गरिएको हो । सुवर्णावती गाउँपालिकामा निर्वाचनको माध्यमबाट उम्मेदवार छनौट गरियो । तर रोल्पा नगरपालिकामा भने लामो छलफलपश्चात मलाई मेयरको उम्मेदवार उठ्न पार्टीले जिम्मेवारी दिएको हो । कृष्ण बहादुर महरासँग मेरो नाता पर्छ । तर मेयरमा उम्मेदवार हुनुमा त्यो नाताले काम गरेको होइन । म लामो समयदेखि पार्टी र जनतासँग जोडिएको छ । मेरो योगदान, मेहनत र क्षमतालाई मूल्यांकन गरी उम्मेदवार बनाइएको हो ।
सम्बन्धित् समाचार भट्टी पसलमा फालिएको अमूल्य भोट
हिजो जनवादका सपना बाँडनुभयो, त्यो पुरा हुन सकेन । अहिले चाहिँ रोल्पा जिल्लालाई कस्तो बनाउने योजना छ तपाईहरुको ?
त्यो एउटा परिस्थिति थियो । हामीले पूर्ण युद्द नजितेपनि अहिलेका सबै उपलब्धि त्यही संघर्षको जगमा प्राप्त भएका हुन । अहिले सिंहदरबारको अधिकार पहिलोपल्ट गाउँमा पुगेको छ । जाती, क्षेत्र, समुदायका मुद्दाहरु सम्बोधन हुने क्रममा छन् ।
अब चाहिँ के गर्छौं त ? यो प्रश्न सबैले गरेका छन् । कमरेडहरुले घोषणा गरिसकेका छन्, हामी रोल्पालाई जनसत्ताको नमूना जिल्ला बनाउँछौं आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा धार्मिक, शैक्षिक तथा यातायातको दृष्टि हामी रोल्पा जिल्लालाई विकसित बनाउनेछौं । यहाँ निमार्णाधिन कृषि विश्वविद्यालयलाई पूर्णता दिँदै शैक्षिक केन्द्रको रुपमा विकास गर्छाैं । यहाँको सडक सञ्जाललाई व्यवस्थित छौं । जडिबुटी, तरकारी तथा अन्न उत्पादनमा अधुनिकीकरण गर्छौ । संचारलाई जोड्नलाई फ्रि वाईफाई तथा विद्युत जोड्ने र विस्तार गर्छाै । वेरोजगार युवाहरुका लागि लोकसेवाका लागि तयारी कक्षाहरु संचालन गर्छाैं । रोजगार सूचना केन्द्रको स्थापना गर्नै लगायतका एजेण्डाहरु हामीले अघि सारेका छौं ।
हाम्रो मुख्य चुनौती भनेको हिजो जनताले जे सपना साँचेका थिए, तिनीहरुलाई अधिकतम पुरा गर्ने नै हुने छ । सामाजिक न्यायसहितको स्थानीय सत्ता, श्रोतमा सबैको पहुँच हुने स्थानीय सत्ताको निर्माण हाम्रो लक्ष्य हुनेछ । यसका लागि पार्टीको योजना र जिल्लाको योजनाका आधारमा हामी अघि बढ्छौं ।
यी एजेण्डाहरु कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिएता त ?
यी एजण्डाहरु सहजै पूरा गर्न सकिन्छ । उसैपनि बढी त यहाँ हाल निर्माणाधिन कुराहरुलाई हामीले निरन्तरता दिई पूर्णता दिने न हो । यहाँ इमान्दार जनता, व्यापारी अनि वृद्धिजिविहरुले हामीलाई साथ दिइएमा हामी हाम्रा ती एजेण्डाहरु पूरा गर्न सक्छौं भन्ने हामीलाई विश्वास छ ।
तपाईहरु नै जित्नुहुन्छ भन्ने आधार के के छन् ?
सम्बन्धित् समाचार बैद्य–बिप्लव, बाबुराम र प्रचण्ड मिल्नुको विकल्प छैन
सबैभन्दा ठूलो भनेको जनताका अभिमत हो । विस २०४८ साल पहिले पनि चुनाव हुँदा हामीले ७०÷८० वटा पूर्वगाविसहरुमा जित्न सफल भएका थियौं । त्यसैले पनि अहिले पनि जनतामा हामीप्रति विश्वास छ । हामीले नै केही गर्न सक्छौं भन्ने उनीहरुलाई थाहा छ । यहाँका सहिद परिवार, कार्यकर्ता अनि यो सिंगो रोल्पावासीले नै माओवादीलाई नै चुन्नेछन् अनि जिताउने छन् भन्ने हामीलाई विश्वास छ ।
जनतामाझ तपाईहरु जाँदा के भन्छन् त उनीहरु ?
जनता माओवादी केन्द्रबाट आशावादी छन् । कृष्णबहादुर महरा अर्थ मन्त्री भएका बेला रोल्पालाई ३५० करोड रुपैयाँ बजेट बाँडेको थियो । गाउँको विकासका क्रममा त्यो खर्च पनि भयो । अहिलेसम्म रोल्पामा जे जति विकास भए त्यो माओवादीले नै गरेको हो त्यसैले उनीहरु अबका दिनमा पनि जेजति गर्छ त्यो माओवादी पार्टीले मात्रै गर्छ, अन्य कुनै दलले गर्न सक्दैन भन्नेमा विश्वस्त छन् ।
माओवादीले रोल्पा जिल्लालाई न्याय गरेको छ । सरकारमा सहभागितादेखि विकास निर्माणसम्म जिल्लाले प्राथमिकता पाएको छ । त्यसबाट समेत यो जिल्लाको योगदान पार्टीले बिर्सेको छैन भन्ने स्प्ष्ट हुन्छ । अहिले केन्द्रीय योजनाका आधारमा कामहरु अगाडि बढे । भोलीका दिन स्थानीय सत्ताको योजनालाई केन्द्रले सहयोग गर्ने अवस्थामा हामीले नमूना जिल्ला बनाउन गारो छैन । जनताले यो कुरा बुझेका छन् । त्यसैले हामी जित्छौं र रोल्पालाई नमूना जनसत्ताको जिल्ला बनाउँछौं ।
असार ६ गते, २०७४ - १५:३८ मा प्रकाशित
टेलिकमले घटायो इन्टरनेट लिज लाइनको महसुल
मिडियामा आएको समाचारको खण्डन गर्दै परराष्ट्रमन्त्रीले भने – नेपाल विदेशीको दबाब र प्रभावमा छैन
राप्रपा उपनिर्वाचनको तयारीमा
सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्य सेवालाई सुदृढ बनाउन सहयोग गर्छौं – कार्यकारी निर्देशक कनेम
सरकारी हस्तक्षेपको विरोधमा अष्ट्रेलियाका दैनिक पत्रिकाले समाचारको ठाउँमा कालो पोते
सुन किन्दै हुनुहुन्छ ? थाहा पाउनुहोस आजको बजार मुल्य
१० लाख अवैध युरोसहित ५ जना पक्राउ
जाजरकोटका सातै स्थानीय तहमा नेकपाको एकता सम्पन्न
मेलम्ची आयोजनाको कामले गति लिने, बाँकी काम पाँच प्रतिशत मात्रै